Isbaheysiga Sacuudiga ayaa duqeymo cirka ah ka bilaabay caasimada Yemen ee Xuuthiyiinta - Wardeeq 24 TV Isbaheysiga Sacuudiga ayaa duqeymo cirka ah ka bilaabay caasimada Yemen ee Xuuthiyiinta Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Isbaheysiga Sacuudiga ayaa duqeymo cirka ah ka bilaabay caasimada Yemen ee Xuuthiyiinta
Isbaheysiga Sacuudiga ayaa duqeymo cirka ah ka bilaabay caasimada Yemen ee Xuuthiyiinta
Isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ee dagaalka kula jira fallaagada Xuutiyiinta Yemen ayaa garaacay bartilmaameedyo militari oo ay leeyihiin dhaqdhaqaaqa Iiraan la safan ee caasimada Sanca saacadihii hore ee Axadii, dadka deegaanka ayaa sidaas sheegay.
Duulaanka ayaa imanaya kadib markii Xuutiyiinta ay sheegteen masuuliyada weeraradii diyaaradaha aan duuliyaha laheyn ay ka geysteen xarun saliida laga soo saaro oo ku taal caasimada Sacuudiga, Riyadh, maalintii Jimcaha, taasoo sababtay dab la xakameeyay.
Weerar ka dhan ah Xuutiyiinta Yemen ayaa halis ku ah xeryaha barakacayaasha ee Marib
UN-ka ayaa qaylo dhaan ka soo saartay xaalada ‘sii xumaanaysa’ ee dagaalada Yemen
Dabkii Xuutiyiinta ayaa sababay dabkii Yemen ee ku dhintay muhaajiriinta Sanca: HRW
Sabtidii, isbahaysigu wuxuu sheegay inuu qabtay oo uu burburiyey diyaarad Drone ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo loo duuliyay dhanka koonfurta Sacuudiga ee magaalada Khamis Mushait.
Dadka ku nool magaalada Sanca ayaa u sheegay wakaalada wararka ee Reuters in diyaaradaha dagaalka ee isbahaysiga ay duqeeyeen goobo ay ku jiraan xerooyin militari oo ay leeyihiin Xuutiyiinta ee koonfurta Sanca iyo goob wax soo saar militari oo ku taal waqooyiga magaalada.
Telefishinka ay maamusho Xuutiyiinta ee Al Masirah ayaa sidoo kale soo wariyay duqeymo dhanka cirka ah oo ay geysanayaan isbahaysiga caasimada, oo ay kujirto garoonka diyaaradaha Sanca.
Jabhaduhu waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gudaha Sacuudi Carabiya, oo ah dalka ugu dhoofinta badan saliida, toddobaadyadii la soo dhaafay. Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay inay ka hortagto inta badan diyaaradaha aan duuliyaha laheyn iyo gantaalada ay Xuutiyiinta ku ridaan garoomada diyaaradaha, saldhigyada hawada iyo kaabayaasha tamarta, laakiin qaarkood ay waxyeelo geystaan.
Isbaheysiga uu hogaaminayo Sacuudiga ayaa la dagaalamaya Xuutiyiinta tan iyo bishii Maarso 2015, bilo kadib markii kooxdu qabsatay caasimada Yemen ee Sanca. Dagaalku wuxuu ku xirmay ismari waagaas wixii ka dambeeyay, iyadoo Sacuudiga uu wajahayo dhaleeceyn caalami ah oo ku aaddan duqeymaha aan kala sooca lahayn ee xagga cirka ah.
Qaramada Midoobay waxay ku tilmaamtay xaaladda Yemen inay tahay masiibada bani’aadamnimo ee ugu xun adduunka oo ay la socdaan gaajo badan, cudur iyo saboolnimo, inta badanna ay sababaan dagaalka. Iskahorimaadku wuxuu dilay qiyaastii 130,000 oo qof – oo ay ku jiraan in ka badan 12,000 oo rayid ah.
Dadaallada diblomaasiyadeed ee dib loo cusbooneysiiyay ee lagu joojinayo dagaalka, Qaramada Midoobay iyo Mareykanka waxay ku boorriyeen Xuutiyiinta – oo sidoo kale cadaadis ku haya weerar ka dhan ah magaalada ay dowladdu maamusho ee Marib ee Yemen – inay u jeestaan ​​wadaxaajood halkii ay ka ahaan lahaayeen koror militari.
Falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in Xuuthiyiinta ay kusii siqayaan Marib – oo illaa iyo dhowaanahan xasilloonaa oo xasilloonaa sababta oo ah goobaha saliidda ee sifiican loo ilaaliyo – waxay ku hanjabeen inay hurinayaan dagaallo kale oo ka socda Yemen.
Dhanka kale, ciidamada dowladda la shaqeeya ayaa kordhiyay weerarada meelaha kale dhawaanahan iyagoo isku dayaya inay ku qasbaan Xuutiyiinta inay fidiyaan kheyraadkooda ayna ka dhigaan kuwo nugul.
Previous articleXuutiyiinta ayaa qirtay in xoogaggoodu ay dab ka kiciyeen xaruntii muhaajiriinta Yemen
Next articleDhowr qof ayaa lagu diley gov’t attack on hospital in Syria’s Idlib